Yemen Qaxooti Somali ah oo lagu dhibaateeyay |
Yemen Qaxooti Somali ah oo lagu dhibaateeyay
Yemen (NogobNews) 10/12/2011 Qaxootiga Soomaalida ah ee ku sugan dalka Yemen ayaa lagu soo waramayaa in dhibaato ba’an ay ku hayaan kooxo hubaysan oo la sheegay inay u gaystaan dhac iyo waxyaabo kale oo ka baxsan bini’aadannimada.
Qunsul ku xigeenka Soomaaliya ee dalka Yemen Xuseen Xaaji Axmed ayaa waxa uu ka hadlay xaalada nololeed ee qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool dalkaasi isagoo sheegay inay heystaan dhibaatooyin farabadan oo ay ugu horeyso xaga amaanka.
Xuseen Xaaji Axmed ayaa waxaa uu sheegay rabshadihi ka dhashay dalka Yemen ay sahashay inay soo baxaan kooxo xubeysan oo dhac u geysta Soomaalida qaxootiga ah, iyagoo gaadiidka kala daga Soomaalida islamarkaana ka dhaca hantida ay haystaan.
Dhinca kale Qunsulka ayaa sheegay inay aad usoo yaraaneyso Soomaalida qaxootiga ah ee gaaraya dalka Yemen, wuxuuna xusay in maalmo ka hor ay magaalada Cadan ka soo baxday doon siday dad qaxooti ah iyadoo ku soo jeeday magaalada Boosaaso hase ahaatee ay ku qalibmatay biyaha u dhaxeeya Cadan iyo Boosaaso halkaasi oo uu sheegay inay ku geeriyoodeen 3 ruux oo ahaa haween Soomaaliyeed.
Dhowaan ayay aheyd markii kulan looga hadlayay arrimaha qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalkaasi ay ku yeesheen Hay’adda ICRC iyo Safaaradda Soomaalida ee dalkaasi.